Muqdisho oo laga cabanayo canshuuro lasoo rogay | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Muqdisho oo laga cabanayo canshuuro lasoo rogay
Muqdisho oo laga cabanayo canshuuro lasoo rogay
Masuuliyiinta ganacsatada ayaa guud ahaan hakad galiyay dhaqdhaqaaqii hawleed ee Bakaaro kaddib markii ay ka cabteen canshuuro fara badan oo lagu soo rogay suuqaasi.
Ganacsatada ayaa dibadbaxyo waaweyn ka dhigay gudaha suuqa waxayna sheegeen inay sii wadayaan inta xal rasmi ah looga helayo lacago xad dhaaf ah oo looga kala qaado dekedda iyo wadooyinka soo galaya Bakaaro, iyaga oo xiray goobaha ganacsiga ee dawada, dahabka, bacadlaha iyo qeybaha kale ee suuqa Bakaaro.
Dhawaan ayey aheyd markii amar kasoo baxay guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho, Xasan Maxamed Xuseen oo ku magac dheer Gen. Muungaab lagu faray ganacsatadu inay bixiyaan dhammaan lagacaha laga doonayo.
Dhinaca kale, qarax ka dhacay garaash ku yaala isgoyska Baar Ubax ayaa burburiyey ugu yaraan shan gaari oo nuuca raaxada ahaa sidoo kalena dabkii ka dhashay qaraxaasi ayaa ku sii fiday bakhaaro iyo goobo shidaal lagu iibiyo wuxuuna sababay khasaare hantiyadeen iyada oo daminta dabkaasi ay gacan ka geysteen dab damisyada shirkadda isgaarsiinta Hormuud iyo kuwa maammulka gobolka Banaadir.
Goobjoogayaasha qaarkood ayaa sheegaya in qaraxu ahaa mid markii hore lagu soo xiray gaari lasoo dhigay garaashka kooxihii watayna ay goobtaasi ka baxsadeen waxyar ka gadaal markii milkiilayaasha garaashku ay laamaha amniga ku wargeliyeen dareenka jira.
Ilaa iyo imminka ma jirto cid sheegatay masuuliyada qaraxa, hase ahaatee ciidamadda ammaanka ayaa baaraya dhacdadaasi.
Previous articleRa’iisulwasaare Cabdiweli oo booqasho ku tagay Dhadhaab
Next articleCabashadii canshuuraha oo xal loo helay